Nepali Channel » पोखरा महानगरपालिका – जो हल्ला नगरी काम गरिरह्यो, हेर्नुस यस्तो हुनुपर्छ काम र योजना
कास्की/पोखरा, देश भरि स्थानिय निकायलाइ चुस्त भन्दा बढी सुस्त भएको आरोप आइराखेको बेलामा पोखरा महानगरपालिकाले भने आफुलाई हल्लाको भिडबाट छुट्याएर उदाहरणीय काम हरु गरेको छ। बिकाशका कामहरुलाई तिब्र गति दिदै नयाँ सोच र सम्भावनामा पनि काम गरेको छ। चोक चोकमा धुलो खाएर बाटो कुरेका सहिदहरुलाई मनोरम पार्कमा पुर्याउने सोच होस् या खुला जिमको अबधारणा होस् पोखरा अरु भन्दा फरक देखिएको छ। हालै पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४\_ ७५ को भौतिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको छ।
महानगर पालिकाले ४९७५ मिटर सडक ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ। यस्तै ५०९५ मिटर सडकमा ग्राभ्लिंग गर्ने काम सम्पन्न गरेको छ। ३५७१५ मिटर कच्ची बाटोको निर्माण समेत गरिसकेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यस्तै १२५ सडकलाई स्तरोन्नति गरेको छ।३०५६७ मिटर बाटो कालोपत्रे गरेको छ।५६४२८ मिटर सडक पक्कि ढलान गरेको छ। यसवर्ष पोखरा महानगरपालिकाले सडक पक्कि गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
यस्तै महानगरपालिकाले पोखरा नगर भित्र तिस वटा खेल मैदान सम्बन्धि कार्यहरू पनि सम्पन्न गरेको छ। वडा कार्यालय र सामुदायिक भवनहरुको निर्माण १३९ वटा सकिसकेको र यसका लागि महा नगर पालिकाले सहयोग गरेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ।
महानगरपालिका र स्थानीय समुदाय मिलेर २२६ वटा साना तथा मझौला खानेपानीका योजनाहरू सम्पन्न गरेको छ. ८५२५० मिटर पाइपलाईन समेत विस्तार गरेको छ।
यसवर्ष मात्र ३८ वटा सार्वजानिक सौचालयको निर्माण गरेको पनि प्रतिवेदनमा देखाइएको छ। नालको निर्माण र सरसफाई सम्बन्धि कार्यमा ३३१९२ मिटर गरिएको छ।पोखराको जिरो किलोमिटर देखि हल्लनचोक सम्मको डिभाइडरलाई समेत सौन्दर्यकरण गर्ने काम महानगरले गरेको छ। साना तथा मझौला खोलाहरुमा कल्भर्ट राख्ने काम पनि महानगरले सम्पन्न गरेको छ।
पोखराका बिभिन्न चोकहरुमा आइल्याण्ड र यात्रुको सहजतालाई मध्येनजर गर्दै यात्रु प्रतिक्षालयको निर्माण गरेको छ। यस कार्यकार बिभिन्न निकायको साझेदारीमा गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। महानगर पालिकाले यस वार्स ३३ वटा सडकलाई कनेक्टिभिटीका रूपमा बनाउनलाई आफ्नो तर्फबाट काम अगाडी बढाएको थियो। कुल ३३ करोड लागत रहेको कनेक्टिभिटी सडक आगामी तिन वर्षमा निर्माण गर्ने महानगरको योजना रहेको पनि महानगरले जनाएको छ। महानगरपालिका स्थानीयको साझेदारीमा गर्न लागिएको यी कार्यहरू बेलैमा सम्पन्न हुनेमा महानगर पालिका ढुक्क रहेको पनि महानगरपालिकाले जनाएको छ।
केहि स्थानमा सिसि क्यामराको जडान, कल्भर्ट निर्माण तथा फेवातालमा जलकुम्भी झार निकाल्ने मेसिन पनि यसवर्ष किनेको पनि जनाएको छ।
यसरि पारदर्शी रुपमा बिकासका कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने सम्भवत पोखरा महानगरपालिका देशमै औलामा गन्न सक्ने स्थानिय निकायमा पर्छ। अरु भन्दा तपाइँ किन फरक हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा मेयर मान बहादुर जिसी भन्नुहुन्छ ‘म एउटा सामान्य किसानको छोरो हु, आज किसानको छोरो मेयर हुदा काम गर्न सकिएन भने गरिबको हितको काम कहिल्यै हुदैन त्यसकारण मैले फरक हुने नहुने भन्दा पनि कम गर्ने कुरालाई प्रमुख मानेको छु।’ अबरोध कत्तिको छ त मेयर साब ? ‘हेर्नुस राम्रो काम गर्न खोज्दा अबरोध नहुने कुरै हुदैन, हाम्रो ब्यबस्था भ्रस्टचार र अपारदर्शिताले खोक्रो बनाएको छ त्यसकारण पनि त्यसलाई सिस्टममा ल्याउन केहि समय र सामर्थ चाहिन्छ नै। मैले नकारात्मक कुराको मुल्यांकन गर्दै अगाडी बढेको छु। ‘
त्यस्तै अब पोखरामा महानगरपालिकामा अनिमियतता रोक्न प्रविधिको ब्यापक प्रयोग गरिने पनि जानकारी आएको छ। हामीले यस बिषयमा मेयरका पर्सनल असिस्टेन्ट लक्षमण तिमिल्सेनालाई पनि सोधेका थियौ। उहा भन्नुहुन्छ, ‘पहिले देखि हस्तलिखित प्रचलनका कारण योजना बाड फाड देखि योजना तर्जुमा गर्ने बेला सम्म धेरै अनिमियतता भएको पाइयो त्यसकारण प्रमुख चुवावट र अनिमियता हुने ठाउमा अब हामीले उच्च प्रबिधिको ब्यबस्था गरेर प्रबिधि मार्फत त्यो सम्पूर्ण कुरालाइ न्यूनीकरण गर्ने तयारि गरेका छौ। जुन काम अगाडी बढी सकेको छ।’
पोखरालाइ सहि र बिकासको बाटोमा हिडाउन तिमिल्सिनाले असल भूमिका निर्वाह गरेको हामीले पाएका छौ। उनि आफै पनि विज्ञानमा मास्टर्स गरेका ब्याक्ति भएका कारण अबको दिनमा अझै स्मार्ट र सुन्दर पोखरा बनाउने कुरामा योजनागत ढंगले लाग्नेछन भन्ने हाम्रो आशा छ।